Maxaa kala haysta Madaxweyne Muse biixii iyo Jelayaashii qarsoonaa ee ku caanbaxay dukaameysiga danta guud ee dalka ? qalinkii Arahman Fidhinle UK
Saturday November 03, 2018 - 10:59:32 in Maqaallo by saleban Cilmi
Maxaa kala haysta Madaxweyne Muse biixii iyo Jelayaashii qarsoonaa ee ku caanbaxay dukaameysiga danta guud ee dalka ? qalinkii Arahman Fidhinle UK Maxaa kala haysta Madaxweyne Muse biixii iyo Jelayaashii qarsoonaa ee ku caanbaxay dukaameysiga danta guud ee dalka ? qalinkii Arahman Fidhinle UK
Musuqa iyo maal-urursigaillihii dhaqaalaha ee dalka lagu boobay waa Taariikh- Taariikhduna waa Tooj lagu iftiimsado mustaqbalka silooga leexdo Taariikhdaa madow ee hore dalka uga dhacday. Dastuurka qaranka JSLayaa inoo cadeeyey in Siyaasada guud ee dhaqaalaha Somalilaan uu ku saleysan yahay Mabaadiid'a Suuqa xorta ah ee aan qof iyo qofaf toona loo xidhi karin. Hadaba waxaa dhacday in shaqiyaad gaar ah shuruucda dalka loo jebiyey oo kooto loogu xidhay illihii dhaqaalahaqaranka anfici lahaa. Dawladnimaduna waa inla illaaliyaa hantida ummadda, Diinta iyo dhaqanka,waana in la horemariyaa baahiyaha aas-aasigaah iyoee adeegyada bulshada.
Dhacii badheedhkaahaaee hantidiiummadda kudhacay iyofadhateysigii dalkaku habsaday kumay koobneyn oo keliya lacagihii sida xariifnimada leh loo leexsaday balse waxaa laysku wada raacay in aan beydh iyo binni loo reebin dalka ee sife gacan-wadaag ah hantidii ummadda loo boobay.Buuga Xirsi X Hassan qoraywuxuu cadeeyey in laga fii'ideystay awoodii madaxweynaha, waxaana uudaaha ka faydayxantii badneyd eesuuqyada Soomalilaan laysla dhexmari jiray. iyada oo laga faai'deysanayo awoodihii dastuuriga ahaa ee qaranku lahaa ayaa la qaybsaday laguna tagri falay Hantidii guurtada iyo maguurtada aheyd ee ummaddu wada laheyd oo dhan.
1- Musuq-maasuqii lagu sameeyey dhamaanmaareyntiimaganta, moorada iyo midhihii dawladnimo,ayaa ilaa maanta xukuumada cusubi maareyntoodii la daaladhacaysaa, waxaana arintan ka sii daran boobkiidhulkii danta guudiyo siyaabihiiqalinka loogu xaday hantidiiqaranku wada lahaa,taa soou saamaxdayGafaneyaashii dhiigaummadda jaqayin ayweli soo indho-cadaadaan si ay ugu sii dheganaadaannaasihii irmaanaa ee qarankani lahaa.
2-Waxaa la wada ogyahay in jileyaasha qarsoon iyo jinni boqoradooda lagu wareejiyey Rusqado iyoheshiisyoaad u badanooaan lagu qeexin xeer nidaamiye dawladeedku waas oo abaal celin malaasan laysu siiyey dhamaanillihii dhaqaalaha ee dalka dakhligiisa kabi lahaa ee kor u soo qaadi lahaa. Waxaa hubaal ah in maanta Somaliland qaranimadii iyo dantii Caamka aheydba ay luntay oo meesha ka baxday.
3- Beratanka iyo bun-tirsiga ka dhexeeya jilayaasha qarsoon qudhooda ayaa sababay in dhacdooyin tiro beelay iyo dhiilooyin is barkanmaareyntooda lagu fashilmomudadii kulmiyihii hore dalka hagaayeyarintan oo dhaawac iyo dhiig-bax gaadhsiisay magac-samaantii haykalkaDawladnimada Somalilaan
4- Qabyaalada la maalgashaday iyo isqawleysiga qaawan ee doorashooyinkii dalku ku dhaceenhore iyo danbeysaba waxay sababtay kala qaybsanaan baahsanoo quluubta shacabka kala fogeysay taasoo sababtay soona dedejisay Caro-qaad kii shir beeleedyadaiyo sii bacrimintii qabyaalada ku saleysan is-xulafeysiga la magac baxay Jeegaanta malaasan (Rainbow coalition)..
5-Jilayaasha qarsoon ee aan kor ku xusay oo isugu jira Shirkadley, Sheerley,Dukaanley, Danley, Dulugleyiyo Dabatooyin kale oodantooda oo keliya raacdaku waas oo dalka hore ugu degayoo dam ka siiyeymudo xileedkii Xukuumadii Siilaanyo ayaa hadana ilqoodha Muse Biixi ku soo eegaaya ka dib markii handaraabka lagaga jiiday xaruntii madaxtooyada oo markii hore u ahaan jirtay degel ay mayracdaan casarkii, subixiina ay habaqleysi iyo hormo qamaam ku soo galaan.
6- Sifeyaashii qaribanaaeeqabyaaladeysnaa ee ayu dhacday Doorashadii madaxtooyada ee13-kiiNovember 2017waxay dalka ku reebtay dil-dilaac iyo diif badan maadaama ay ummaddu wadadaalacatay in aan xisbi loo codeyn ee qolada iyo qabiilkaloo codeeyey. Qaanuunkii dhisme siyaasadeedkii dimuqraadiga ahaanauuisu bedelay qabyaalad. codkii muwaadinka xorta ah ay la wareegeen qabali iyo qaraabo oo ay meeshii ay rabeenku riteen,taasinawaxay shacabkiiSomalilaan ku reebtay qawdhan iyo qabyaaladii oodulca siifuratay, Cadaawe siyaasadeed, Colaado degamsan iyo isu jabhadeynta maanta taagan ookhatarteeda leh.
7- Qarrada Siyaasadeed iyo jiritaanka qaanuunada qabyaaladeysan ee Xisbiga Kulmiye tiir-dhexaadka u ahaaayaa hoos u sii dhacdaymaadaamashacabka badankiisu isku qanciyeenin hadii:"Cod doorasholaba qabaa'il oo waaweyniku xulufoobaanay ka dhigan tahay in aanay dadka intiisa kalekursigasi fudud u fuulin weligood" arintaa oo ay hoosta kaga lingaxan tahay qaan-sheegashada quusta laga taagan yahayee ay ku leeyihiin"Waa markayagii ee kursiga gudoomiyahanagu soo wareejiya"Waa arnin khatarteeda leh hadaan wax laga bedelin waqtigeeda dhaw.
8-Waxaa Kulmiyaha cusubi uu shaaca ka qaadayinMalaayiin doolar lagulunsaday Mashaariicda Biyo gelinta Caasimada Hargeisa, waxayarintani keentay in ay inaga aamin baxaandeeq-bixiyeyaashii lacagtaa fidinta biyaha inoogu yaboohay taasina waxay macanaastay oo marin habaabisay maareyntii macnihii dawladnimo. Heshiiskii Somalilaan iyo Imaaraatigu wada galeen ee Dekeda iyo Saldhiga Berbera lagu wareejiyey isna kumuu iman go'aan wadareed cokan,muuna aheyn mid daahfuran waxaana ka soo baxay mad-madow farabadan oo aanla kala garaneyn muddada ay wax kala soconayaan ee la bilaabi doono wixii lagu heshiiyey.
9- Qaloocii galayQorshe howleedyadii horumarinta iyo higsiga qaranka ee (2012 - 2016 )oowada fashilmay iyo mashaariicdii Dawladaha hoose eeGPLJ( Joint programme)oo wadahagaasaytaa sooku adkaanaysa in kulmiyaha cusubiisna toos u saxo mudo kooban Qorshaha cusub ee higsiga qaranka ( NP2)maadaama aanu qorasha cusubi isna ku saleysneynhantida faraheena ku jirta ee weli khawaajiyiintaaduun laga raajicinaayo..
10- Guntii iyo Gebagebadii qormadan : Waxaa Kulmiyihii hore dalka kaga tegayhabab qaloocan oo qarsoodi ah oo danta guud ee dalkalagu qaybsado, Cadaalad daroiyo Cibaarooyin badan oodalkalagu dhacayoo weli inoo huursan,Taa saana shacabka u cadeysay incaaqidadihiiSiyaasadeed eexukuumadiihoreee kulmiye ku dhisneydoo keliyahab-dhaqankaXulafeysan (Clan politics/Jeegaan malaasan) iyogacan-wadaag si loo jumladeysto dhamaan joharadii ummaddu wada laheyd. Waxaanailhii dhaqaalaha ee dalka oo dhanlaga yeelay heshiisyo iyoRusqado dad gaar ah u xidhan oo aan cid kale la siin Karin(Exclusive). Waxaa hadaba Madaxweyne Muse Biixi looga Fadhiyaa in uu dhamaan illihii dhaqaalaha ee hore loo qaybsaday uu gacanta dawlada ku soo wada celiyo si kefedii miisaanku qaranka dib ugu soo noqoto.